China Resilient Seat Gate Valve ထုတ်လုပ်သူများနှင့် တင်သွင်းသူများ - Allway Valve
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Gate Valve > Resilient Seat Gate Valve
Allway သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် China resilient seat gate valve ထုတ်လုပ်သူများနှင့် China resilient seat gate valve ပေးသွင်းသူများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် ခံနိုင်ရည်ရှိသော ထိုင်ခုံတံခါးအဆို့ရှင်နှင့် လက်ကားရောင်းချမှုကို စတင်ခဲ့ပြီး ထို့နောက် တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သည့် ၁၆ နှစ်အတွင်း ဝန်ထမ်း ၂၀ မှ ၂၀၀ နီးပါး တိုးလာခဲ့သည်။ အမှန်တကယ် တပ်ဆင်ပြီးနောက် အာမခံကာလအတွင်း အမှန်တကယ် လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အစားထိုးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအရ ပိုက်လိုင်းဒီဇိုင်းဖြင့် ဖောက်သည်များအား ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ခံနိုင်ရည်ရှိသော (Soft seal) gate valve၊ စက်မှုအဆို့ရှင်၊ Resilient gate valve အဖွင့်နှင့်အပိတ် အစိတ်အပိုင်းများသည် ဂိတ်ဖြစ်ပြီး၊ gate ၏ရွေ့လျားမှု၏ ဦးတည်ချက်သည် fluid ၏ ဦးတည်ရာသို့ ထောင့်မှန်ဖြစ်ပြီး gate valve သည် အပြည့်အ၀ဖွင့်နိုင်ပြီး အပြည့်အဝပိတ်နိုင်သည်။ ချိန်ညှိ၍မရပါ။ တံခါးတွင် အလုံပိတ်မျက်နှာနှစ်ခုပါရှိသည်၊ အသုံးအများဆုံးမုဒ် ဂိတ်အဆို့ရှင်သည် အလုံပိတ်မျက်နှာနှစ်ခုကို သပ်ပုံစံ၊ သပ်ထောင့်၊ အဆို့ရှင်ဘောင်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကွဲပြားသည်၊ အမည်ခံအချင်း DN50~DN1200၊ ဝန်ဆောင်မှုအပူချိန် :â‰¤200â„ƒ .
Resilient seat gate valve တွင် မူရင်းဒီဇိုင်း၊ လက်ရာမြောက်သော နည်းပညာ၊ ပြီးပြည့်စုံသော ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စမ်းသပ်ခြင်းနည်းလမ်းများ ပါ၀င်ပြီး ISO9001 နိုင်ငံတကာ အရည်အသွေးစနစ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ရေပေးဝေရာတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုလျက်ရှိသော နိုင်ငံနှင့် ဒေသအများအပြားသို့ တင်ပို့ရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။ ရေနုတ်မြောင်း၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်၊ ဓာတ်ဆီဓာတုစက်မှုဇုန်၊ သတ္တုဗေဒနှင့် အခြားကုန်သွယ်မှုများ။
BS5163 ခံနိုင်ရည်ရှိသောထိုင်ခုံတံခါးအဆို့ရှင်သည်ဗြိတိသျှစံနှုန်းတံခါးအဆို့ရှင်ဒီဇိုင်းစံဖြစ်ပါတယ်။ အရည်ခံနိုင်ရည်သည် သေးငယ်သည်၊ အဖွင့်နှင့်အပိတ်သည် သေးငယ်သည်၊ အဖွင့်နှင့်အပိတ်သည် အားစိုက်ထုတ်မှုနည်းသည်၊ အလတ်စားစီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းကို ကန့်သတ်မထား၊ တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိ၊ ဖိအားလျှော့ချခြင်းမရှိ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအလျားသည် တိုတောင်းသည်၊ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းမွန်သည်၊ ပုံသဏ္ဍာန်သည်အတော်လေးရိုးရှင်းသည်၊ ပုံသဏ္ဍာန်လုပ်ငန်းစဉ်ကောင်းမွန်သည်၊ လျှောက်လွှာအကွာအဝေးသည်ကျယ်ပြန့်သည်။
F5 ခံနိုင်ရည်ရှိသော ထိုင်ခုံတံခါးအဆို့ရှင်၏ မျက်နှာချင်းဆိုင် အတိုင်းအတာသည် F4 ဂိတ်အဆို့ရှင်များထက် ပိုရှည်သည်။ မီးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းစနစ်များတွင် ယေဘူယျအားဖြင့် မြေပြင်မှ မြင့်မားသောအကွာအဝေးတွင် တပ်ဆင်လေ့ရှိသည်။ ဤအဆို့ရှင်သည် ယေဘူယျတံခါးအဆို့ရှင်ကို ညံ့ဖျင်းသော၊ ပျော့ပျောင်းနွမ်းနယ်မှု၊ သံချေးတက်လွယ်ခြင်းနှင့် အခြားချို့ယွင်းချက်များကို ကျော်လွှားနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ရိုးရာတံခါးအဆို့ရှင်ကို အစားထိုးခြင်းဖြစ်သည်။ ခြေရာခံပုံပျက်ခြင်းအတွက် လျော်ကြေးပေးပြီး တံဆိပ်ခတ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ရရှိစေရန် elastic gate plate ကိုအသုံးပြုသည်။
F4 Resilient seat gate valve သည် elastic seat gate valve ၏အားသာချက်များအပြင်၊ ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်သောအဆို့ရှင်အဖွင့်၊ အဖွင့်၊ အပိတ်တို့ကို လျင်မြန်စွာနှင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာအသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် မကြာခဏမြေပြင်မှမြင့်သောအကွာအဝေးတွင်တပ်ဆင်ထားသောမီးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းစနစ်များတွင်အသုံးပြုလေ့ရှိပါသည်။ ဤအဆို့ရှင်သည် ယေဘူယျတံခါးပေါက် အဆို့ရှင်တံဆိပ်အား ညံ့ဖျင်းခြင်း၊ ပျော့ပျောင်းခြင်း၊ သံချေးတက်လွယ်ခြင်း နှင့် အခြားချို့ယွင်းချက်များကို ကျော်လွှားနိုင်စေပါသည်။ ၎င်းသည် ခြေရာခံပုံပျက်ခြင်းအတွက် လျော်ကြေးပေးပြီး ကောင်းမွန်သောတံဆိပ်ခတ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိစေရန် ရိုးရာတံခါးအဆို့ရှင်၏ အစားထိုးမှုဖြစ်သည်။
Stem Resilient Seat Gate Valve တက်လာခြင်း။
elastic seat gate valve ၏ အားသာချက်များအပြင် stem resilient seat gate valve သည် ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်သော valve အဖွင့်၊ အဖွင့်၊ အပိတ်တို့ကို လျင်မြန်စွာ စိတ်ချယုံကြည်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် မကြာခဏ မြေပြင်မှ မြင့်မားသောအကွာအဝေးတွင် တပ်ဆင်ထားသော မီးနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းစနစ်များတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိပါသည်။ .ဤအဆို့ရှင်သည် ယေဘူယျတံခါးပိတ်အဆို့ရှင်အား ညံ့ဖျင်းသော၊ ပျော့ပျောင်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ သံချေးတက်လွယ်ခြင်းနှင့် အခြားချို့ယွင်းချက်များကို ကျော်လွှားနိုင်စေပါသည်။ ၎င်းသည် ရိုးရိုးတံခါးအဆို့ရှင်၏ အစားထိုးမှုဖြစ်ပြီး၊ ခြေရာခံပုံပျက်ခြင်းအတွက် လျော်ကြေးပေးရန်နှင့် ကောင်းမွန်သောတံဆိပ်ခတ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိစေရန်အတွက် elastic gate plate ကိုအသုံးပြုသည်။ .
မမြင့်တက်ဘဲ ပင်စည်ခံနိုင်ရည်ရှိသော ထိုင်ခုံတံခါးအဆို့ရှင်၏ ကောင်းမွန်သော တံဆိပ်ခတ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် အဆို့ရှင်တစ်ခုလုံး၏ ပုံပျက်ခြင်းလျော်ကြေးပေးခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရရှိသည်၊၊ တံဆိပ်ခတ်မှုအားနည်းခြင်း၊ ယေဘူယျတံခါးအဆို့ရှင်၏ ရေယိုစိမ့်ခြင်းနှင့် သံချေးတက်ခြင်းတို့ကို ကျော်လွှားနိုင်ပြီး တပ်ဆင်မှုကို ပိုမိုထိရောက်စွာ သက်သာစေပါသည်။ space.ပိုက်လိုင်းရေ၊ မိလ္လာ၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ ရေနံ၊ ဓာတုလုပ်ငန်း၊ အစားအစာ၊ ဆေးဝါး၊ အပေါ့စား အထည်အလိပ်၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်၊ သင်္ဘော၊ သတ္တုဗေဒ၊ စွမ်းအင်စနစ်နှင့် အခြားအရည်ပိုက်လိုင်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် Allway Valve ဟုခေါ်သော ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှ ထုတ်ကုန်များကို ဝယ်ယူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အရည်အသွေးမြင့် Resilient Seat Gate Valve သည် စျေးပေါသော ကုန်ပစ္စည်းကို ရယူလိုသူများအတွက် ရေပန်းစားပါသည်။ Quotations များနှင့် စျေးနှုန်းစာရင်းများကို ပံ့ပိုးပေးသော လက်ကားပစ္စည်းများလည်း ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှစျေးနှုန်းချိုသာစွာဝယ်ယူရန်စိတ်ချယုံကြည်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်ပြည်တွင်းပြည်ပမှမိတ်ဆွေများနှင့်ဖောက်သည်များကိုကြိုဆိုပြီးကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဆအနိုင်ရရှိနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။